Cunto hilibka hilibka | February 2020
Ugu Weyn Ee Cunto hilibka hilibka
Hilibka bakaylaha: jilicsanaanta ugu fiican
Markhaatiga koowaad ee bakaylaha sida xayawaanka la sameeyey waqti dheer ka hor, dib ugu soo noqnoqda wakhtiyadii hore. Tani waxaa loo yaqaanaa qadiimiga Rome ilaa 2000 sano ka hor. Xayawaanka xoolahaas ku jira miisaan warshadeed ayaa bilowday oo kaliya 2 qarni ka hor. Maanta, sayniska waxa uu ogyahay ilaa 700 nooc ee bakaylaha, laakiin sannad kasta tiradani waxay kordhisaa sababtoo ah isbeddelada dabiiciga ah ee kala duwan ama xayawaan farabadan oo xayawaan ah.
NZK: sharaxaad, astaamaha, sawirrada, daryeelka iyo dayactirka ee bakaylaha casaanka cusub ee New Zealand
Akhrinta ku saabsan noocyada xayawaanka kala duwan, badanaa magaca magaca aad ka qaadi karto meesha ay ka yimaadeen. Laakiin marka laga hadlayo bakaylaha casaanka cusub ee New Zealand - maaha. Maroodi-wabiyada New Zealand, oo laga hadli doono waqti dambe, waxay ka timaadaa California, USA. Waxaad baran doontaa waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan bakaylaha New Zealand iyo sharaxaadda ee jinsiga adigoo akhrinaya maqaalkan.
Cuncun faraha Faransiiska: sifooyinka taranta ee guriga
Bakeyle waa xayawaan jilicsan oo badanaa laga heli karaa doorka xayawaanka. Awoodgan, bacriminta asalka ah ee bakaylaha, ramaalka Faransiiska (ama lop-eared), ayaa si fiican u muuqda. Xayawaanku wuxuu u muuqdaa muuqaal quruxsan, dabeecad xasiloon mana u baahnayn kharashka dayactirka oo badan.
Bakayle: sida loo daryeelo iyo sida loo quudiyo guriga
Mid ka mid ah maaddooyinka faa'iidada leh maanta waa midabka taranka. Ganacsigu waa qashin-la'aan, sababtoo ah waxaa lagu qiimeeyaa hilibka iyo xayawaanka. On mid ka mid ah jiilalka hilibka, laakiin halkii loo yaqaan hybrid-cross-country Hyplus waxaan ka wada hadli doonaa maqaalkan. Faahfaahinta iyo Qodobbada Naxwaha Muuqaal aad u kala duwan oo ka mid ah Beelaha oo dhan waa awooda abuuritaanka farcankiisa, laakiin gabdhaha Hyplus waxaa lagu habeeyey qoyaan dabiiciga ah.
Cuncunka cad cad: cagaarka, daryeelka iyo quudinta
Dhammaan noocyada kala duwan ee bakaylaha gudaha, caleemaha cad waxay u taagan yihiin wax soo saarkooda sare iyo tusayaal wax soo saar leh. Tani waa jinsi ah jihada hilibka, kaas oo, si taxadar leh loo daryeelo, waxay kuu oggolaaneysaa inaad hesho hilib wanaagsan oo jilicsan oo ah qadar balaaran. Noocyada content ee bakaylaha noocan oo kale ah, waxaan tixgelineynaa maqaalka.
Bakeyle Jikol: wuxuu ku tarmaa guriga
Qaar badan oo ka mid ah beeraha yaryar ee gaarka loo leeyahay iyo beeraha waaweyn ayaa ah taranta lo'da ee hilibka lo'da. Wixii laantan oo ah xayawaanka xoolaha, tayada dalagga beeraha ayaa aad u muhiim ah sida miisaanka dhaqso ah. Qalabkaan waxaa si buuxda u heystey geedka Faransiis ee bakaylaha, chicol. Tilmaamaha iyo sifooyinka galka Jilaalka Breed waxaa lagu qiimeeyaa miisaankii degdegga ahaa, sidaas darteed hadafka ugu weyn ee taranta bakteeriyadani waa hilib wanaagsan oo tayo wanaagsan leh.
Sida loo koro bakaylaha hilibka
Caqabada hore ee caanka ah ee ku saabsan "maaha kaliya dhogorta qiimaha leh, laakiin sidoo kale laba ama saddex kiilo oo hilib ah" looma lumin waxtarkeeda. Bakeyleerka ayaa si dhab ah loo qurxiyo labadaba helitaanka maqaarka, iyo helitaanka hilibka cunnida qafiifka ah. Furan dhadhanka ma aha sida dalabka sida hilib, sidaas maqaalkan waxaan diiradda saari doonaa hilibka naaxinta.
Si aad u haysato bakaylaha, marka hore, waxaad u baahan tahay inaad barato shuruucda dayactirka, nafaqada, daryeelka iyo taranka. Doorashada ee jilitaanka bakayle waxay ku xiran tahay ujeedada iibsigeeda. In this article waxaan ka fiirsan doonaa sifooyinka iyo shuruucda ah ee taranta German German Motley Giant. Asalka asalka jarmalka kala duwan ee jarmalka, balastarka jarmalka, dhisaha iyo magacyo kale oo badan ayaa leh jilaan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Cunto hilibka hilibka 2020